यस अध्ययन मालामा हामी “प्रबन्धहरू” (DISPENSATIONS) को अध्ययन गर्नेछौं। यस शब्दको बाइबलीय अर्थ बुझ्नलाई हामी शुरूमा समय लिनेछौं। तर यस शब्दलाई हेर्नु अगाडि त्यहाँ अर्को कुरा छ जसलाई हामीले पहिला बुझ्न खाँचो छ।
परमेश्वर कहिल्यै बदलिनुहुन्न। उहाँ सधैं एकसमान हुनुहुन्छ। मलाकी ३:६ मा स्वयम् परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण वाक्य पढ्छौं, “म _____________ ______________ _____________ ____________। यसैले हे याकूबका सन्तान हो, तिमीहरू नष्ट भएका छैनौ।” परमेश्वर, परमेश्वर हुन छाड्नुहुन्न भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुन सक्छौं। परमेश्वर जे हुनुहुन्छ सो हुन छाडेर एक्कासी बदलिनुहोला भनी हामीले कहिल्यै फिक्री गर्नु पर्दैन।
किनकि म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, धेरै _____________ र ________ जनहरूले, जुन कुराहरू तिमीहरू देख्छौ, तिनलाई देख्‍ने इच्छा गरे, तर देखेनन्; र जुन कुराहरू तिमीहरू सुन्छौ, तिनलाई _________ इच्छा गरे, तर _____________” (मत्ती १३:१७)।
तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू मसँग अझै __________ छन्, तर तिमीहरू तिनलाई अहिले सहन सक्दैनौ” (यूहन्ना १६:१२)।
व्यक्ति-व्यक्तिसित व्यवहार गर्दा परमेश्वरले यस्तै तरिका अपनाउनुहुन्छ। के मुक्ति पाउनेबित्तिकै परमेश्वरले तपाईंलाई तपाईंले जान्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउनुभयो? _____________। परमेश्वरले विश्वासी जनहरूलाई आफ्नो सत्यता एकैपटकमा सबै नै सिकाउनुहुन्छ कि क्रमिकरूपमा? ________________। परमेश्वरले “शिशु” ख्रीष्टियनलाई “दूध”, अलिक पाकोलाई “मासु” दिनुहुन्छ (१ पत्रुस २:२; १ कोरिन्थी ३:१-२)। परमेश्वरले आफ्ना गहन सत्यताहरू हामीलाई शुरूमा नै सबै दिनुभएको भए हामीले “पचाउन” सक्नेथिएनौं! भर्खरै जन्मेको बच्चालाई मासु-भात खुवाउन खोजे जस्तै हुनेथ्यो! एक कक्षाको बालक अलजेब्रा सिक्न तयार हुँदैन। अलजेब्रा र ज्यामितिको समय पछि आउँछ, तर पहिला त उसले जोड-घटाउ गर्न नै सिक्नुपर्छ!
परमेश्वरले आफूलाई “बाइबल” भन्ने पुस्तकमा प्रकट गर्नुभएको छ। के तपाईंलाई थाह छ, बाइबल एकैपटक आएको होइन? के तपाईंलाई थाह छ, नूहसित बाइबलै थिएन? के तपाईंलाई थाह छ, मण्डलीको शुरूआत (पेन्टेकोस्टको दिनमा, प्रेरित अध्याय २) हुँदा विश्वासी जनहरूसित नयाँ नियमको एउटै पुस्तक थिएन?
“मसित बाइबलै थिएन, तर म बगैंचाको शितलमा परमेश्वरसँगै हिँड्थे।”
“मसित बाइबलै थिएन, तर बेला बखतमा परमेश्वर मकहाँ देखा पर्नुहुन्थ्यो र मसित कुरा गर्नुहुन्थ्यो” (उत्पत्ति १७:१; १८:१ इत्यादि)
“मेरो बाइबलमा पाँच पुस्तकहरू थिए – उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्था।”
“मेरो बाइबलमा मोशासित भएका पाँच पुस्तकहरू, साथै यहोशू र न्यायकर्ताका पुस्तकहरू र साथै मैले लेखेका कतिपय भजनहरू थिए।”
“मेरो बाइबलमा पुरानो नियमका प्रायःजसो पुस्तकहरू थिए तरैपनि सबै थिएन।”
“मेरो बाइबलमा पुरानो नियमका सबै पुस्तकहरू थिए तर नयाँ नियमका पुस्तहरू भने कुनै पनि थिएनन्।”
“मेरो बाइबलमा पुरानो नियमका सबै पुस्तकहरू थिए र नयाँ नियमका सबै पुस्तकहरू थिए। मेरो मृत्यु हुन भन्दा अलिक अगाडि परमेश्वरले मलाई नयाँ नियमको अन्तिम पुस्तक लेख्‍न प्रयोग गर्नुभयो।”
“मेरो बाइबलमा पुरानो नियम र नयाँ नियमका सबै पुस्तकहरू अर्थात् ________ ओटा पुस्तकहरू छन्!”
इतिहासभरि नै परमेश्वरले मानिससित कृपा र अनुग्रहको व्यवहार गर्दै आउनुभएको छ र पुरुष, स्त्री, बालबालिकाहरूलाई आफूसित एक सुन्दर, व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्‍न सम्भव तुल्याउनुभएको छ। शताब्दियौंदेखि परमेश्वरले मानिसलाई “__________ले __________द्वारा” (एफेसी २:८) बचाउने कार्य गर्दै आउनुभएको छ। के अब्राहमले यसरी मुक्ति पाएका हुन् (उत्पत्ति १५:६)? ________। अब्राहमले यसरी नै मुक्ति पाए (रोमी ४:३), दाऊदले पनि त्यसरी नै (रोमी ४:६) र हामीले पनि त्यसरी नै मुक्ति पाउँदछौं (रोमी ४:५)! अनन्तसम्म बचाइएका सबै (नूह, यशैया, पत्रुस आदि) ले यो भन्नेछन्, “हामी केवल परमेश्वरको अनुग्रह (परमेश्वरको दया र प्रेम जसको म योग्य छैन) ले मुक्ति पाएका हौं। धन्यवाद प्रभु, तपाईंले मेरो प्राण बचाउनुभयो!”
अर्को कुराको विचार गरौं। कसैले शनिवारको दिन काम गरिरहेको देख्यौं भने हामीले के गर्छौं? के उसलाई मृत्यु दण्ड दिन्छौं? __________। शनिवार काम गर्ने व्यक्तिलाई मृत्यु दण्ड दिइनुपर्छ भन्ने त्यहाँ व्यवस्था थियो (प्रस्थान ३५:२)? _______। दाँज्नुहोस्, गन्ती १५:३२-३६ जहाँ “दाउरा बटुलेको” कारण (विश्राम दिनको व्यवस्थालाई भङ्ग गरेको हुनाले) एकजनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ! आज हामी यस्तो पक्कै पनि गर्दैनौं, गर्छौं र?
धेरै अगाडि आदमलाई एउटा रूखको फल नखाने आज्ञा दिइएको थियो (उत्पत्ति २:१६-१७)। के आज त्यो आज्ञा जारी छ? के आज कुनै फलवृक्ष छ जसको फल नखाने आज्ञा दिइएको छ? _____। संसारमा कुनै “प्रतिबन्धित रूख” छ? ______। के परमेश्वरले आदमसित हामीसँग जस्तै व्यवहार गर्नुभयो? ________।
विचार गर्नुहोस्, के अब्राहाम प्रत्येक आइतवार विश्वासी जनहरूसित भेला हुने गर्थे? __________। के दाऊदले मानिसहरूलाई पानीमा बप्‍तिस्मा दिन्थे? ________। के मोशाले इस्राएलका सन्ताहरूलाई भेला गराएर कहिल्यै प्रभु भोज लिए? ________। के सोलोमनलाई “सारा जगतमा गएर सबै प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर” (मर्कूस १६:१५) भन्ने आज्ञा कहिल्यै दिइयो? ___________। यी भिन्नताहरू प्रस्टै देखिने भिन्नताहरू हुन् जसलाई हामी मान्यता दिनुपर्छ। परमेश्वरले आज हामीसित माग गर्नुहुने कुराहरू ती पहिलेका मानिसहरूसित माग गर्नुभएन र परमेश्वरले ती मानिसहरूसित माग गर्नुभएका कुराहरू हामीसित माग गर्नुहुन्न। बेग्लाबेग्लै समयमा बेग्लाबेग्लै मानिसहरूसित परमेश्वरले बेग्लाबेग्लै किसिमले व्यवहार गर्नुहुन्छ।
अब्राहाम अघि विश्वका मानिसहरू एउटै समूहका थिए जसलाई “जातिहरू” (अन्यजातिहरू) भनिन्छ। अब्राहाम पछि विश्वका मानिसहरू दुई समूहका भए, यहूदीहरू र अन्यजातिहरू। अब्राहाम अघि परमेश्वरले खतना कुनै पनि कुराको चिन्ह स्वरूप गरिनुपर्ने आज्ञा दिनुभएको थिएन तर अब्राहामको समयमा त्यो आज्ञा दिनुभयो (रोमी ४:९-१२)।
“प्रबन्ध” शब्दको अर्थ
“प्रबन्ध” भनेर रुपान्तर गरिएको ग्रीक शब्द हो, ओइकोनोमिया (यसलाई अङ्ग्रेजीको इकोनोमि (ECONOMY) सित तुलना गर्नुहोस्)। यो शब्द वास्तवमा दुईओटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ: १. ओइकोस् अर्थात् घर २. नोमोस अर्थात् व्यवस्था वा नियम। यसैले आइकोनोमियाको अर्थ हुन्छ, “घरको व्यवस्था वा नियम”।
यही ग्रीक शब्दलाई भण्डारीपन भनेर लूका १६:२,३,४ मा रुपान्तर गरिएको छ। तसर्थ “प्रबन्ध” के भनेर बुझ्न हामीले भण्डारीपनको विषयमा केही कुरा बुझ्नुपर्छ।
भण्डारी कसलाई भनिन्छ? “घर प्रबन्धक” (household manager) लाई भण्डारी भनिन्छ। ऊ अर्काको घरबार र सम्पत्तिको देखरेख गर्ने व्यक्ति हो। ऊ अर्कोको स्वामित्वमा रहेको थोकको जिम्मा लिने व्यक्ति हो। हामीमध्ये धेरैजसोलाई भण्डारीको आवश्यकता पर्दैन, हामी आफै आफ्ना थोकको देखरेख गर्न सक्छौं। तर कसैको १० ओटा घर, ५०० बिघा जग्गा, २५ ओटा कार, ८ ओटा ट्रक, ३ ओटा पौडी खेल्ने पोखरी र एक निजी कोइला खानी समेत छ भने ऊ आफैले ती सबै कुराको देखरेख गर्न सक्दैन। यी सबै कुराको प्रबन्ध (manage) गर्न उसलाई मानिसहरूको आवश्यकता पर्छ। भण्डारी भनेको एक प्रबन्धक (MANAGER) हो जसले अर्काको स्वामित्वमा रहेको थोकहरूको निम्ति जिम्मेवारी हुन्छ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 15:44:112020-04-28 14:32:54परिचय